Joyina uAirbnb ekuncedeni ngendawo yokuhlala abantu abayi-100 000 abaye basabela kwikhwelo lokulwa iCOVID-19
Nceda iqhawe lifumane indawo
Nikela ukuze kubekho imali yeendawo zokuhlala abo basabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19 abatshotsha phambili. Sisebenza kunye nemibutho engenzi ngeniso ukuze siqinisekise ukuba iminikelo yakho iyafika kwabo bayidingayo.
Nikela ngemali ngoku
Thumelela nabanye abantu
Yonke isetyenziselwa ukunceda abo basabele kwikhwelo lokulwa i-coronavirus
Imali onikela ngayo iya kwimibutho engenzi ngeniso enceda abasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala kwikhwelo ukuze bafumane iindawo zokuhlala ezikufutshane nezigulana zabo okanye ezikude neentsapho zabo ukuze zikhuseleke.
UAirbnb wenza izixhobo zokunceda imibutho engenzi ngeniso ukuze kuncedwe abo basabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19
Senze inkqubo enceda imibutho engenzi ngeniso ifumane iindawo zokuhlala abasebenzi bezempilo nabo basabele kuqala kwikhwelo lokulwa i-coronavirus kuAirbnb. Xa incediswa nguwe, ingabhukisha iindawo zokuhlala abantu abangakumbi.